MB 2016 aprily - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2016 Aprily
Any amin’ny faran’ny Filazantsarany dia azonao vakiana ireto teny manaitra nataon’ny apostoly Jaona ireto: «Famantarana maro hafa koa no nataon’i Jesosy teo anatrehan’ny mpianany, izay tsy voasoratra amin’ity boky ity [...] hafa, dia ataoko fa izao tontolo izao dia tsy mahazo ny boky tokony hosoratana » (Jaona 20,30:2; ).1,25). Miorina amin’ireo fanamarihana ireo sy ny fiheverana ny fahasamihafana misy eo amin’ireo Filazantsara efatra, dia azo tsoahina fa tsy nosoratana ho toy ny soritra feno tamin’ny fiainan’i Jesosy ireo sary voatonona ireo. Manazava i Jaona fa ny asa sorany dia natao “mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, Zanak’Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin’ny anarany amin’ny finoana” ( Jaona 20,31 ). Ny fitoriana ny vaovao mahafaly momba ny Mpamonjy sy ny famonjena nomena antsika ao Aminy no tena ifantohan’ny Filazantsara.
Na dia hitan’i Jaona aza fa mifandray amin’ny anaran’i Jesosy ny famonjena (fiainana) ao amin’ny andininy faha-31, ny Kristianina dia miresaka momba ny famonjena amin’ny fahafatesan’i Jesosy. Na dia marina aza io teny fohy io, ny hany fanondroana ny famonjena ny amin’ny fahafatesan’i Jesosy dia afaka manakona ny fahafenoan’ny maha-izy Azy sy ny zavatra nataony ho famonjena antsika. Mampahatsiahy antsika ny zava-nitranga tamin’ny Herinandro Masina fa ny fahafatesan’i Jesosy – tena manan-danja tokoa – dia tsy maintsy jerena amin’ny toe-javatra lehibe kokoa izay ahitana ny Fahatongavan’ny Tompo ho nofo, ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany ho any an-danitra. Izy rehetra ireo dia zava-dehibe, tsy azo sarahina amin'ny asa fanavotana ataony - ny asa izay manome fiainana antsika amin'ny anarany. Koa mandritra ny herinandro masina, toy ny amin’ny taona sisa, dia tiantsika ny hahita ao amin’i Jesosy ny asa fanavotana tonga lafatra.
Ny fahaterahan'i Jesosy dia tsy fahaterahan'ny olon-tsotra isan'andro. Na dia tsy manam-paharoa amin'ny lafiny rehetra aza izy io dia maneho ny fiandohan'ny fahatongavan'Andriamanitra ho nofo. Tamin'ny nahaterahan'i Jesosy Andriamanitra dia tonga amintsika olombelona tahaka ny niterahan'ny olombelona rehetra hatramin'ny andron'i Adama. Na dia nijanona tamin'ny naha-izy azy aza izy, ny Zanak'Andriamanitra Mandrakizay dia naka ny ain'ny olombelona manontolo hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, hatramin'ny nahaterahany ka hatramin'ny fahafatesany. Amin'ny maha olona azy dia Andriamanitra iray manontolo izy ary olombelona manontolo. Amin'ity fanambarana mavesatra ity dia mahita hevitra mandrakizay izay mendrika fankasitrahana mandrakizay mitovy isika.
Tamin’ny fahatongavany ho nofo, dia nivoaka avy tao amin’ny mandrakizay ilay Zanak’Andriamanitra mandrakizay ary, tamin’ny maha-olombelona nofo aman-dra, dia niditra tamin’ny zavaboariny, izay nofehezin’ny fotoana sy ny habaka. “Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra tahaka ny Zanaka Lahitokan’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana” (Jao. 1,14).
Eny tokoa, Jesosy dia olona tena misy amin'ny maha-olombelona azy, fa tamin'ny fotoana iray, dia Andriamanitra tanteraka koa izy - raha ny hevitry ny Ray sy ny Fanahy Masina. Nanatanteraka faminaniana maro ny fahaterahany ary ahitana ny fampanantenantsika famonjena.
Tsy nifarana tamin’ny fahaterahan’i Jesosy ny fahatongavana ho nofo – nitohy hatrany ivelan’ny fiainany teto an-tany manontolo ary mbola tanterahana amin’izao andro izao miaraka amin’ny fiainan’olombelona be voninahitra. Ny Zanak'Andriamanitra tonga nofo (izany hoe tonga nofo) dia mitoetra amin'ny maha-izy azy amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina - ny maha-Andriamanitra Azy dia manatrika tsy misy fepetra ary mahery indrindra amin'ny asany - izay manome ny heviny manokana amin'ny maha-olombelona Azy. Izany no voalaza ao amin’ny Romana 8,3-4: “Fa izay tsy hain’ny lalàna, satria nahalemy ny nofo no nataon’Andriamanitra: nirahiny ny Zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny ota, ary nanameloka ny ota tao amin’ny nofo Izy mbamin’ny fahamarinana avy amin’ny ota. Ny lalàna notakiana dia ho tanteraka amintsika, izay tsy miaina araka ny nofo ankehitriny, fa araka ny fanahy.” Nanohy ny fanazavan’i Paoly fa “ny ainy no namonjena antsika” (Romana 5,10).
Ny fiainana sy ny asa fanompoan'i Jesosy dia mifamatotra tsy azo faritana - izy roa dia ampahany amin'ny fahatongavana ho nofo. I Jesosy-Andriamanitra Jesosy dia Mpisoronabe tonga lafatra sy mpanelanelana eo amin'Andriamanitra sy ny olona. Nandray anjara tamin'ny natioran'olombelona izy ary nanao ny rariny ho an'ny zanak'olombelona tamin'ny fiainana fiainana tsy misy ota. Io zava-misy io dia mamela antsika hahatakatra ny fomba ahafahany mamboly fifandraisana amin'Andriamanitra sy amin'ny olona. Na dia mankalaza ny nahaterahany tamin'ny Krismasy aza isika matetika, ny zava-nitranga tamin'ny fiainany manontolo dia anisan'ny fiderana mandrakariva - na dia mandritra ny herinandro masina aza. Mampiharihary ny fiainam-pifandraisan'ny famonjena antsika ny fiainany. Jesosy dia nanangona an Andriamanitra sy ny olombelona miaraka aminny fifandraisana tonga lafatra aminny endriny.
Ny filazana fohy fa voavonjy tamin’ny alalan’ny fahafatesan’i Jesosy isika dia mitarika ny sasany ho diso hevitra fa ny fahafatesany dia fanavotana nentin’Andriamanitra ho amin’ny fahasoavana. Mivavaka aho mba ho hitantsika rehetra ny fahadisoan'io hevitra io. TF Torrance dia manoratra fa, manoloana ny fahatakarana marina ny sorona ao amin'ny Testamenta Taloha, dia tsy mahita sorona mpanompo sampy ho famelan-keloka isika amin'ny fahafatesan'i Jesosy, fa ny fijoroana ho vavolombelona mahery vaika momba ny sitrapon'Andriamanitra feno fahasoavana (Atonement: The Olona sy asan’i Kristy: Olona sy asa fanompoana an’i Kristy], p. 38-39). Ny sorona mpanompo sampy dia nifototra tamin’ny foto-kevitry ny famaliana, fa ny sorona nataon’ny Isiraely kosa dia niorina tamin’ny famelan-keloka sy ny fampihavanana. Tsy nahazo famelan-keloka noho ny fanampian’ny fanatitra ny Isiraelita, fa nahita ny tenany navelan’Andriamanitra ho afaka tamin’ny fahotany ka nampihavanina taminy.
Ny sorona nataon’i Israely dia natao ho vavolombelona hanambara sy hanehoana ny fitiavan’Andriamanitra sy ny fahasoavany mikasika ny fiafaran’ny fahafatesan’i Jesosy, izay omena amin’ny fampihavanana amin’ny Ray. Tamin’ny fahafatesany koa no nandresen’ny Tompontsika an’i Satana sy nanalany ny fahefana tamin’ny fahafatesana: «Satria ny zaza dia nofo aman-drà ankehitriny, dia nandray izany koa Izy, mba hanaisotra ny fahefana amin’izay manam-pahefana amin’ny fahafatesana amin’ny fahafatesany, dia ny devoly ka nanavotra izay tsy maintsy ho mpanompo nandritra ny androm-piainany noho ny tahotra ny fahafatesana » (Hebreo 2,14-15). Nanampy i Paoly fa i Jesosy dia “tsy maintsy manapaka mandra-panaorin’Andriamanitra ny fahavalony rehetra ho eo ambanin’ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany horinganina »(1. Korintiana 15,25-26). Ny fahafatesan’i Jesosy dia maneho ny lafiny manavotra ny famonjena antsika.
Amin’ny Alahady Paska dia mankalaza ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty isika, izay manatanteraka faminaniana maro ao amin’ny Testamenta Taloha. Ny mpanoratra ny Hebreo dia nanasongadina fa ny famonjena an’i Isaka tamin’ny fahafatesana dia taratry ny fitsanganana amin’ny maty (Hebreo 11,18-19). Ianarantsika avy amin’ny bokin’i Jona fa “telo andro sy hateloan’alina” izy tao amin’ny vatan’ilay hazandrano lehibe (Jo. 2:1). Niresaka momba ny fahafatesany sy ny fandevenana azy ary ny nitsanganany tamin’ny maty i Jesosy2,39-40); Matio 16,4 ary 21; John 2,18- iray).
Faly tokoa isika mankalaza ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty satria mampahatsiahy antsika fa tsy farany ny fahafatesana. Izy io kosa dia maneho dingana manelanelana amin’ny lalantsika mankany amin’ny ho avy - ny fiainana mandrakizay ao amin’ny firaisana amin’Andriamanitra. Amin’ny Paska dia ankalazaintsika ny fandresen’i Jesosy ny fahafatesana sy ny fiainam-baovao izay hananantsika ao aminy. Miandrandra amim-pifaliana isika amin’ny fotoana izay ahitana ny Apokalypsy 21,4 Hoy ny teny: “[...] ary hofafan’Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin’ny masony, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana; fa efa lasa ny voalohany. Ny fitsanganana amin’ny maty dia maneho fanantenana ny amin’ny famonjena antsika.
Ny nahaterahan'i Jesosy dia nifarana tamin'ny fiainany sy ny fiainany nifandimby nitarika ny fahafatesany. Saingy, tsy afaka manasaraka ny fahafatesany amin'ny fitsanganany amin'ny maty isika, ary tsy afaka manasaraka ny fitsanganany amin'ny maty. Tsy nivoaka tao am-pasana Izy mba hiaina fiainan'olombelona. Niakatra tany an-danitra tamin'ny voninahitra olombelona izy, ary tamin'ity hetsika lehibe ity no nanomboka ny asa natombony.
Ao amin’ny sasin-tenin’ny bokin’i Torrances, Atonement, dia nanoratra toy izao i Robert Walker: “Amin’ny fitsanganana amin’ny maty, i Jesosy dia mandray ny maha-olombelona antsika ary mitondra izany eo anatrehan’Andriamanitra ao anatin’ny firaisana sy ny fiombonan’ny fitiavana Trinite”. Hoy i CS Lewis: “Ao amin’ny tantaran’ny Kristiana, Andriamanitra dia midina ary avy eo miakatra indray”. Ny vaovao tsara mahafinaritra dia ny nanandratan’i Jesosy antsika niaraka taminy. “[...] ary niara-natsangany tamintsika sy nampitoetra antsika any an-danitra ao amin’i Kristy Jesosy, mba hasehony amin’ny andro ho avy ny haben’ny haren’ny fahasoavany amin’ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin’i Kristy Jesosy.” ( Efesiana. 2,6- iray).
Fahatongavana ho faty, maty, fitsanganana amin'ny maty ary fiakarana - izy rehetra ireo dia tafiditra amin'ny famonjena antsika ary noho izany ny fiderana antsika amin'ny Herinandro Masina. Ireo zava-miafina ireo dia manondro ny zava-drehetra notanterahin'i Jesoa ho antsika tamin'ny fiainany manontolo sy ny asany. Mandritra ny taona dia andao hahalala bebe kokoa momba azy isika sy izay nataony ho antsika. Izy io dia midika ho asa famonjena tonga lafatra.
Enga anie ny fitahiana azontsika amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy homena anao sy ireo olon-tianao,